Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Dicken Ashworth, Geraldine McEwan, Helena Bonham Carter, John Thomson, Liz Smith, Nicholas Smith, Peter Kay, Peter Sallis, Ralph Fiennes, Vincent Ebrahim
ငယျငယျတုနျးက ကွညျ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီ Animation လေးကို အလှမျးပွပွေနျကွညျ့နိုငျအောငျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ရဲဝနျထမျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ Wallace တဈယောကျဟာ သူ့လကျစှဲတျောခှေးလေး Gromit နဲ့ သီးနှံစိုကျခငျးတှကေို ဖကျြဆီးတဲ့ရနျသူတှကေနေ ကာကှယျပေးတဲ့ အလုပျကိုအဓိကလုပျရတာပါ။ တဈနမှေ့ာတော့ စိုကျခငျးတှမှော ယုနျပေါငျးမြားစှာရဲ့ ဖကျြဆီးခံရတာတှကွေောငျ့ သီးနှံပွိုငျပှဲမတိုငျခငျ ဒီပွသာနာကိုဖွရှေငျးဖို့စိုးရိမျလာရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ Wallace တဈယောကျ ဒီယုနျတှရေဲ့ အန်တာရယျကိုဖွရှေငျးနိုငျပါ့မလား ? နောကျကှယျကဘယျသူတှကွေိုးကိုငျနလေဲဆိုတာကို ရှာဖှဖေျောထုတျဖို့ဖွဈလာပါတော့တယျ
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီ Animation လေးကို အလွမ်းပြေပြန်ကြည့်နိုင်အောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Wallace တစ်ယောက်ဟာ သူ့လက်စွဲတော်ခွေးလေး Gromit နဲ့ သီးနှံစိုက်ခင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့ရန်သူတွေကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ အလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ရတာပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ စိုက်ခင်းတွေမှာ ယုန်ပေါင်းများစွာရဲ့ ဖျက်ဆီးခံရတာတွေကြောင့် သီးနှံပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် ဒီပြသာနာကိုဖြေရှင်းဖို့စိုးရိမ်လာရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Wallace တစ်ယောက် ဒီယုန်တွေရဲ့ အန္တာရယ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား ? နောက်ကွယ်ကဘယ်သူတွေကြိုးကိုင်နေလဲဆိုတာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်
David Button Kate Munkenbeck Lisa Butler Marnie Paxton Merlin Crossingham Nick Park Penny Foster Richard Beek Steve Box Vinny Cannon
Dicken Ashworth Geraldine McEwan Helena Bonham Carter John Thomson Liz Smith Nicholas Smith Peter Kay Peter Sallis Ralph Fiennes Vincent Ebrahim
Ben Whitehead Christopher Fairbank Dicken Ashworth Edward Kelsey Geraldine McEwan Helena Bonham Carter James Mather John Thomson Liz Smith Mark Gatiss Nicholas Smith Nigel Pilkington Noni Lewis Pete Atkin Peter Kay Peter Sallis Ralph Fiennes Robert Horvath Vincent Ebrahim William Vanderpuye
Option 1 storage.msubmovie.com 387 MB SD (480p)
Option2megaup.net 387 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 387 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 387 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 992 MB HD (1080p)
Option6megaup.net 992 MB HD (1080p)
Option7yuudrive.me 992 MB HD (1080p)
Option9megaup.net 3.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 3.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 yuudrive.me 3.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 sharer.pw 3.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1